Nandiso ireo tsaho ny Tim: “Ho kandidà Ravalomanana…” | NewsMada
Nandiso ireo tsaho ny Tim: “Ho kandidà Ravalomanana…”
“Marobe ny resaka mandeha amin’izao fotoana izao. Mazava ny tianay ampitaina fa ho kandidà amin’ny fifidianana ny filoha Ravalomanana. Vonona amin’ny lafiny rehetra izy ary ho mpandresy isika, koa tokony ho vonona amin’izany”, hoy ny depiote Razafimanantsoa Hanitra teny Avaradrano, ny asabotsy teo. Nanteriny fa miandry ny fotoana ametrahany dosie fotsiny sisa ny mpanorina ny Tim, ary tsy ho ela intsony izany. Nitondrany fanazavana koa ny momba ny Komity mpanohana an’i Marc Ravalomanana (KMMR) sy ny Tim. “Mpikambana avy hatrany ao anatin’io komity io ny Tim. Tsy misy fifandirana eo amin’ny roa tonta. Natao ho an’ny olona rehetra ny KMMR, indrindra ireo tsy te hiditra anaty antoko politika. Ahitana sokajin’olona samihafa te -hanohana ny filoha Ravalomanana ny KMMR. Misy ireo miseho masoandro mandeha kianja fa eo koa ireo any anaty ny sehatrasa misy azy avy…”, hoy ihany izy.
Etsy andaniny, efa mivonona amin’ny fampandaniana ny mpanorina ny Tim amin’ny fifidianana ireo mpanohana azy nifamotoana tetsy amin’ny Magro Behoririka, ny asabotsy teo. “Tsy matahotra fifidianana isika. Tsy tolona intsony no ataontsika eto fa ny fanomanana amin’ny fifidianana”, hoy ny mpitarika, Rakotomandimby Zafilahy Stanislas.
Ankoatra izany, tafatsangana koa ny mpanohana ny filoha teo aloha, Ravalomanana any Frantsa. Nifamory nijery ny tokony hanohanana ny mpanorina ny Tim sy hampandaniana azy izy ireo, ny faran’ny herinandro teo. Mandritra izany, nihazo ny tany Maroantsetra Ravalomanana ary nitafa mivantana amin’ny vahoaka.